Abaphakeli nabaphakeli beplastiki - abahlinzeki baseChina bokufakwa epulasitiki
Umshini Wokudla Seal Roll 10 ″ X 50'- 2 ukubalwa
Izici: 1. Usebenzisa impahla ye-Premium PA / PE nemishini yobuchwepheshe esezingeni eliphakeme. Izinto zokusetshenziswa ze-PA / PE: Ubuchwepheshe obunobufakazi obuthathu busuka ezingqimbeni ezi-5 ezijiyile zokushisa okuphezulu okucindezelwa kwesikhathi eside, izingqimba zenayiloni (PA) zivimbela umoya obandayo namanzi ukuthi angene esikhwameni sokucindezelwa. Izinto ezithambile zenayiloni ezithwala ukubhoboza umshini: Amandla kaNylon wokuqina namandla acindezelayo ayashintsha ngethempelesha futhi angaba esiqandisini futhi abe yiqhwa, anokumelana nokushisa okuqinile. 2. Thobela i-fo ...
Ukuhlanganisa izici ezihamba phambili ze-Quad Seal ne-Stand Up Pouch, i-Flat Bottom Bag (eyaziwa nangokuthi yi-Box Pouch) inesikhalazo esiphezulu, ngenkathi ikhulisa kokubili ishalofu nendawo yokupakisha nge-gusset yesitayela esezansi esenziwe ngamabhokisi. Flat Bottom Izikhwama zivumela ukugcwaliswa okulula okuphezulu futhi kufanelana nezinhlobonhlobo zezicelo zemakethe, kusuka kokudla kwasolwandle, ikhofi, ne-muesli, kuya ekudleni kwesilwane nemikhiqizo yokulima. Izici ze-Flat Bottom Bag I-solid lamination eqinile ihlinzeka ngokuqina okuhle kokuzimela okuphelele ...
Ukuhlanganisa izici ezihamba phambili ze-Quad Seal ne-Stand Up Pouch, i-Flat Bottom Bag (eyaziwa nangokuthi yi-Box Pouch) inesikhalazo esiphezulu, ngenkathi ikhulisa kokubili ishalofu nendawo yokupakisha nge-gusset yesitayela esezansi esenziwe ngamabhokisi. Flat Bottom Izikhwama zivumela ukugcwaliswa okulula okuphezulu futhi kufanelana nezinhlobonhlobo zezicelo zemakethe, kusuka kokudla kwasolwandle, ikhofi, ne-muesli, kuya ekudleni kwesilwane nemikhiqizo yokulima. Izici ze-Flat Bottom & Stand Up Bag Ukuqina okunamandla okuqinile kunikeza ukuqina okuhle okuphelele ...
Ukuhlanganisa izici ezinhle kakhulu ze-Quad Seal ne-Stand Up Pouch, I-Kraft Paper Flat Bottom Bag (eyaziwa nangokuthi yi-Box Pouch) inesikhalazo esiphezulu, ngenkathi ikhulisa kokubili ishalofu nendawo yokupakisha nge-gusset yesitayela sekhathoni esisezansi. Flat Bottom Izikhwama zivumela ukugcwaliswa okulula okuphezulu futhi kufanelana nezinhlobonhlobo zezicelo zemakethe, kusuka kokudla kwasolwandle, ikhofi, ne-muesli, kuya ekudleni kwesilwane nemikhiqizo yokulima. Izici ze-Kraft Paper Flat Bottom Bag I-solid lamination eqinile ihlinzeka ngokuqina okuhle kwe ...
I-HONGBANG isabalalise imikhiqizo yekhwalithi ephezulu ephrintiwe yesitoko esezingeni eliphakeme kumakhasimende kulo lonke elaseYurophu naseMelika iminyaka engaphezu kwengu-20. Inikezela ngezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zebhithi lepulasitiki laminated ifilimu. Iningi lemikhiqizo yamafilimu isetshenziselwa ukufakwa kokufakwa kokudla kuthi okunye kuye kuzinhlelo ezikhethekile. Siphakela izixazululo zebanga lasendle lokusebenzisa ifilimu. Inani lokucushwa okungenzeka kwefilimu yethu enezendlalelo eziningi alinamkhawulo. Noma ngabe ...
Ukuphrinta Kwamafilimu Okuphrintiwe Kwangokwezifiso Kwokupakisha Okuzenzakalelayo
Kulezi zinsuku, ukunciphisa amagciwane kuba yinto ebaluleke kakhulu, ngakho-ke imboni yethu ijoyina impi nomhlaba. Sinikeza ukufakwa kwesifihla kobuso ngokwezifiso kwamasaka epulasitiki anamalogo, avikela ubuso bakho buso kuwo wonke umonakalo ongaba khona futhi sandise nesikhathi sokugcina. Izikhwama zepulasitiki zinoziphu noma iteyipu yokuziqinisa phezulu. Lokhu kwenza imaski yobuso ibe lula futhi isebenziseke kalula. Iphakethe lifaka buso obungu-1-20 noma ngaphezulu. Sikhiqiza isikhwama semaski esilahlwayo kanye ne-reusable ma ...
Isikhwama sekholamu yomoya sokusetshenziswa komkhiqizo ohlanganisiwe futhi wenze umonakalo ungabi nobubanzi obujwayelekile bekholamu yomoya u-2 cm, 3 cm Ububanzi bekholomu lomoya, bunomphumela ongcono wokuqinisa. Kepha okusetshenziswa kakhulu ububanzi bekholomu engu-3 cm. Ubukhulu bune-7um, ukuqina okuqinile kunokuvikela okungcono futhi. Uma udinga ukwenza ngokwezifiso, sicela uxhumane nathi ukuze kuxoxwe. Futhi ingahle idabuke noma isikwe, izopakisha izimpahla ezisengozini, njengezinto zobuciko bengilazi, ukulethwa okuvezwa, iwayini elibomvu, ubumba, izinsimbi zokunemba, njll.
I-Kraft Paper Stand Up Isikhwama
I-Kraft paper stand up pouch isikhwama sokumisa iphepha isitayela esithandwayo kakhulu sokupakisha emakethe ngoba lolu hlobo lokupakisha luyahlukahluka futhi lusebenza futhi luyakhanga. Njengoba igama ngokwalo liphakamisa, lezi zikhwama ziyakwazi ukusukuma kuyo yonke indawo eqinile. Inekhono elihle lokubonisa ishelufu futhi banganciphisa izidingo zesitoreji futhi bandise isikhala seshalofu. Imvamisa, isikhwama sokusukuma sisetshenziswa kakhulu ku-snack, i-condiment, ubucwebe, itiye noma ukupakisha kwekhofi. Properties of the stand up pouch the s ...
Isikhwama sePlastiki sukuma isitayela semakethe esithandwa kakhulu emakethe ngoba lolu hlobo lokupakisha luyahlukahluka futhi lusebenza futhi luyakhanga. Njengoba igama ngokwalo liphakamisa, lezi zikhwama ziyakwazi ukusukuma kuyo yonke indawo eqinile. Inekhono elihle lokubonisa ishelufu futhi banganciphisa izidingo zesitoreji futhi bandise isikhala seshalofu. Imvamisa, isikhwama sokusukuma sisetshenziswa kakhulu ku-snack, i-condiment, ubucwebe, itiye noma ikhofi, ukudla kwenja, ukupakisha kokudla kwezilwane zasekhaya. Izici zokupakisha kokudla kwezilwane zasekhaya ...
Isikhwama se-ziplock sokuma siyisitayela esithandwayo kakhulu semakethe ngoba lolu hlobo lokupakisha luyahlukahluka futhi lusebenza futhi luyakhanga. Njengoba igama ngokwalo liphakamisa, lezi zikhwama ziyakwazi ukusukuma kuyo yonke indawo eqinile. Inekhono elihle lokubonisa ishelufu futhi banganciphisa izidingo zesitoreji futhi bandise isikhala seshalofu. Imvamisa, isikhwama sokusukuma sisetshenziswa kakhulu ku-snack, i-condiment, ubucwebe, itiye noma ikhofi, ukudla kwezinja, ukudla kwezilwane, nokupakishwa kwezinsiza zefoni. Okufanele ...